I-China Hotel Housekeeping Trolley abakhiqizi nabaphakeli |I-VOSHON
Inqola Yokugcinwa Kwezindlu Ehhotela
Inqola Yokuhlanza Yepulasitiki
Ihhotela Liquor Trolley
I-Automatic Shoe polisher
Inqola Yempahla Yehhotela
Umgqomo kadoti / Umgqomo kadoti
Isisetshenziswa sasekhaya esihlakaniphile
Ikalishi eligoqekayo, Ikalishi elinamasondo angu-4, Izinqola zokuthenga zokudla, Imigqomo Eqinile Yesibonakude Eqinile Eqoqekayo Yesitoreji Yokuthenga Ukuvakasha Ukuthutha Imithwalo Yehhovisi
Intengo ye-FOB:US $0.5 - 9,999 / Ucezu
Inani elincane le-oda:100 Isiqephu/Izingcezu
Ikhono Lokuhlinzeka:10000 Ucezu/Izingcezu Ngenyanga
Ubukhulu bomkhiqizo 15.3″D x 13″W x 35.8″H
Umbala eyenziwe ngokwezifiso
Isisindo sento 6.5 Amakhilogremu
Izinto Ezisezingeni Eliphezulu: Ikalishi elisebenzisekayo eligoqekayo elenziwe ngekesi le-ABS eliqinile eliqinile eliqinile elivumelana nemvelo elinesibambo se-aluminium evikela ukugqwala (esiqinile nesilula), futhi ingalihudula ivundlile, iphephile futhi ithembekile.
Ukulayisha Okunamandla Kakhudlwana: Le nqola yokuthenga izokwazi ukumelana nesisindo esisindayo somthwalo kunezinye izinqola zegrosa.Uma ikhreyithi ivulwa, izilinganiso zayo zangaphakathi zingu-15.7*15.3*13 amayintshi esikhala esikhulu sokubeka, umthamo ngu-55L.Isisekelo singasekela kufika ku-140 lbs futhi isivalo singasekela kufika ku-295 lbs.
I-Universal Wheels & Rear Wheel Break System: Ikalishi ifakwe amasondo angu-4 akhiphekayo angu-360° azungezisayo angenamsindo, kulula ukushintsha indlela lapho isetshenziswa.Futhi amasondo amane anenkinobho yokubhuleka angakwazi ukuvimba unodoli ukuthi angasheleli uma engasetshenziswa.Amasondo enjoloba okugqoka nokumelana nokucindezela, ukugingqika kalula kunoma yimuphi umgwaqo, aqinisekisa impilo ende.
Isibambi Esigobekayo Nesishintshekayo: Le nqola yegrosa enamasondo igoqeka phansi ize ifike ku-3″ ugqinsi kuphela ukuze uthole isitoreji esihlangene okulula ukusingena kunoma iyiphi imoto noma ikhabethe, sinesisindo esingaphansi kwamakhilogremu angu-6.5.Isibambo esilungisekayo singadlulela kubude obu-2 obuhlukene ukuze silawule futhi sihoxise isitoreji esilula.Uma isibambo sinwetshwe ngokugcwele, ukuphakama komkhiqizo kungu-35.8 amayintshi sekukonke.
Ukusetshenziswa Okuningi: Ikalishi elihambayo alifanele kuphela noma yikuphi ukuthutha okuvela ezitolo zokudla kanye nezimpahla zokukhempa.Ilungele futhi amapotimende, amanzi asemabhodleleni, izinto zezemidlalo, izinto zasengadini, izinto zasebhishi & nempahla yasekhishini, izinto zothisha zasekilasini.Lokhu kungasetshenziselwa ukuthutha, ukuthenga, ukuhamba, indawo yokugcina izinto ephathekayo, kanye nezihlalo.
Okwedlule: Ikalishi elincane eligoqayo
Olandelayo: I-Trolley yokuthenga egoqayo
Igumbi lehhotela elishibhile lensimbi yokuhlanza indlu ...
Ihotela yesevisi yeretshurenti ye-Wholesale...
Ihhotela laseChina ifektri yensimbi umsebenzi osindayo ilondolo enkulu...
I-Wholesale yehhotela i-trolley yokugcina indlu
UKUDAYISA OKUSHISAYO—Uchungechunge lwefriji elincane
Umshini wokuwasha ogoqayo